နေမာငါးပိုင္း နတ္ေတြဝိုင္း အဓိ႒ာန္ ပုတီးစိပ္နည္း – Pwintsan
နေမာငါးပိုင္း နတ္ေတြဝိုင္း အဓိ႒ာန္ ပုတီးစိပ္နည္း
အေႂကြးေက် ေငြဝင္ လာဘ္႐ႊင္တဲ့ ပုတီးစိပ္နည္းပါ နေမာငါးပိုင္း ဂါထာကို နေမာငါးခ်က္ စီးပြားတက္ ဂါထာဟုလည္း လူသိမ်ားပါသည္။
မိမိအိမ္မွာ လူျမင္သာတဲ့ ေနရာမွာ ရွင္ဘုရင္ပုံကပ္ထားပါ မိမိ ေမြးေန႔မွာ အိမ္ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ (၁၅)ၫႊန္႔ ေငြအိုးထဲထည့္ပါ ေငြအိုးဆိုတာ ခက္ခက္ခဲခဲ လိုက္ရွာမေနနဲ႔ ေငြေရာင္သုတ္ထားတဲ့ အိုးဆိုရပါၿပီ။
ခေရ (၂) ၫႊန္႔ ေၾကးအိုးထဲထည့္ပါ ေၾကးအိုးဆိုတာ ခက္ခက္ခဲခဲ လိုက္ရွာမေနနဲ႔ ေၾကးသုတ္ထားတဲ့ အိုးဆိုရင္ရပါၿပီ။ ႐ြက္လွ (၁၇) ၫႊန္႔ ေ႐ႊအိုးထဲ ထည့္ပါ ေ႐ႊအိုးဆိုတာလည္း ခက္ခက္ခဲခဲ လိုက္ရွာမေနနဲ႔ ေ႐ႊေရာင္သုတ္ထားတဲ့ အိုးဆိုရပါၿပီ။
ေ႐ႊအိုး၊ ေငြအိုး၊ ေၾကးအိုး စီးပြားတိုး ဓာတ္တူနာမ္တူေဆးဖက္ယူ နံတူသတ္ကအေသရ.(ႀကိမ္းေသရ)ေပါ့ ေ႐ႊေငြ ဓာတ္ဖြင့္တာေပါ့။ မိမိအိမ္ဘုရားမွာ မနက္/ည ထိုပန္းအိုးေတြနဲ႔ ပန္းေတြထိုးၿပီး စြဲစြဲၿမဲၿမဲသာ ႐ြတ္ဖတ္ၿပီး ပုတီးစိပ္ေတာ့ေပါ့ဗ်ာ။
ဤ နေမာငါးခ်က္ စီးပြားတက္ဂါထာကို ပုတီးမစိပ္ခင္ ဦးစြာ ပထမ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင္ဆုံး ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစာၦမိ သံဃံ သရဏံ ဂစာၦမိ ၿပီးလ်င္။
၁ ~ ေနမာ တႆ
၂ ~ ေနမာ တႆ ဘေဂဝတာ
၃ ~ ေနမာ တႆ အေရဟတာ
၄ ~ ေနမာ တႆ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
၅ ~ ေနမာ တႆ ဘဂေဝတာ အရေဟတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ဤ နေမာငါးခ်က္ စီးပြားတက္ဂါထာကို ပါ႒ိ ငါးေၾကာင္း အစအဆုံးဆိုၿပီးမွ ပုတီး တစ္လုံးခ်၍ စိပ္ပါ ၁၀၈ လုံး ပုတီးကုံးျဖင့္ ပုတီးစိပ္ပါ တစ္ေန႔ကို ပုတီး ( ၉ ) ပတ္ အဓိဌာန္ ( ၉ ) ရက္တိတိ စိပ္ပါ။
အက်ိဳးတရားမ်ားကား ထိုသို႔ နေမာငါးခ်က္ စီးပြားတက္ ဂါထာကို ပုတီးစိပ္ေသာသူဟာ သိသာစြာ စီးပြားတိုး၍ အက်ိဳးမ်ားလာမည္ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစ။
အကြွေးကျေ ငွေဝင် လာဘ်ရွှင်တဲ့ ပုတီးစိပ်နည်းပါ နမောငါးပိုင်း ဂါထာကို နမောငါးချက် စီးပွားတက် ဂါထာဟုလည်း လူသိများပါသည်။
မိမိအိမ်မှာ လူမြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ရှင်ဘုရင်ပုံကပ်ထားပါ မိမိ မွေးနေ့မှာ အိမ်ဘုရားမှာ ကံ့ကော် (၁၅)ညွှန့် ငွေအိုးထဲထည့်ပါ ငွေအိုးဆိုတာ ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်ရှာမနေနဲ့ ငွေရောင်သုတ်ထားတဲ့ အိုးဆိုရပါပြီ။
ခရေ (၂) ညွှန့် ကြေးအိုးထဲထည့်ပါ ကြေးအိုးဆိုတာ ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်ရှာမနေနဲ့ ကြေးသုတ်ထားတဲ့ အိုးဆိုရင်ရပါပြီ။ ရွက်လှ (၁၇) ညွှန့် ရွှေအိုးထဲ ထည့်ပါ ရွှေအိုးဆိုတာလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ လိုက်ရှာမနေနဲ့ ရွှေရောင်သုတ်ထားတဲ့ အိုးဆိုရပါပြီ။
ရွှေအိုး၊ ငွေအိုး၊ ကြေးအိုး စီးပွားတိုး ဓာတ်တူနာမ်တူဆေးဖက်ယူ နံတူသတ်ကအသေရ.(ကြိမ်းသေရ)ပေါ့ ရွှေငွေ ဓာတ်ဖွင့်တာပေါ့။ မိမိအိမ်ဘုရားမှာ မနက်/ည ထိုပန်းအိုးတွေနဲ့ ပန်းတွေထိုးပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲသာ ရွတ်ဖတ်ပြီး ပုတီးစိပ်တော့ပေါ့ဗျာ။
ဤ နမောငါးချက် စီးပွားတက်ဂါထာကို ပုတီးမစိပ်ခင် ဦးစွာ ပထမ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ဆုံး ရွတ်ဆိုပူဇော်ပါ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပြီးလျင်။
၁ ~ နမော တဿ
၂ ~ နမော တဿ ဘဂဝေတာ
၃ ~ နမော တဿ အရဟေတာ
၄ ~ နမော တဿ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ
၅ ~ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။
ဤ နမောငါးချက် စီးပွားတက်ဂါထာကို ပါဋ္ဌိ ငါးကြောင်း အစအဆုံးဆိုပြီးမှ ပုတီး တစ်လုံးချ၍ စိပ်ပါ ၁၀၈ လုံး ပုတီးကုံးဖြင့် ပုတီးစိပ်ပါ တစ်နေ့ကို ပုတီး ( ၉ ) ပတ် အဓိဌာန် ( ၉ ) ရက်တိတိ စိပ်ပါ။
အကျိုးတရားများကား ထိုသို့ နမောငါးချက် စီးပွားတက် ဂါထာကို ပုတီးစိပ်သောသူဟာ သိသာစွာ စီးပွားတိုး၍ အကျိုးများလာမည် ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။